SAWIRRO+XOG-Dhammaan Saxiixyada 6 Kooxood ee Ugu Sarreeya Horyaalka England ee January 2018. | Puntlandi.ca
Home Ciyaaraha SAWIRRO+XOG-Dhammaan Saxiixyada 6 Kooxood ee Ugu Sarreeya Horyaalka England ee January 2018.
SAWIRRO+XOG-Dhammaan Saxiixyada 6 Kooxood ee Ugu Sarreeya Horyaalka England ee January 2018.
Waxaa Qoray: Garaad Axmed Jaamac
Shabakadda wararka ee Puntlandi.ca ayaa waxa ay idinla wadaagaysaa adeegyada laacibiinta ay bishii janaayo ee dhammaatay la wareegeen 6 kooxood ee ugu saraysa horyaalka England ee Premier League.
Liverpool, oo kamid ah lixda kooxood ee ugu saraysa horyaalka England ayaa noqotay kooxda la wareegtey laacibka ugu qiimaha badan ee horyaalka bishii dhammaatay ee January, kadib markii ay Virgil van Dijk kadhigtay daafaca abid ugu qaalisan dunida.
Alexis Sanchez ayaa ka soo dhaqaaqay kooxdii uu sanadihii ugu dambeeyey qaab ciyaareedkiisa kusoo dhisayey ee Arsenal isagoona ku biiray Manchester United oo adeegiisa kuheshay adduun lacageed iyo Henrikh Mkhitaryan oo dhinaca kale aadey.
Alexis Sanchez ayaa waxaa la hadal hayaa inuu booska kala bixi karo Lukau, waxaana booskiisii bedeli doona Pierre-Emerick Aubameyang oo cadaadiska ku sii xoojin doonaa Alexandre Lacazette oo dhaliyey 9 goal kadib 22 kulan oo horyaalka lagu soo bilaabay.
Imaanshaha Pierre-Emerick Aubameyang ee kooxda Arsenal ayaa sababtay dhinac kale inuu Chelsea u dhaqaaqo Olivier Grioud oo maalintii ugu dambaysay ee suuqa kala iibsiga ku biiray kooxda macalin Antonio Conte.
Olivier Grioud ayaa laga yaabaa inuu helo fursaddii uu raadinayey ee ahayd inuu helo daqiiqado badan oo uu garoonka kujiro si uu boos uga helo xilkiisa koobka adduunka ee 2018, maadaama qaab ciyaareedka Alvaro Morata uusan ladhacsanayn maamulka Chelsea.
Kooxda Tottenham ayaa lasoo wareegatey Lucas Moura, oo u adkaysan waayey inuu kusii negaado kursiga kaydka ee kooxda kadhisan France ee PSG.